ဥရောပနှင့်တတိယကမ္ဘာစစ် (1953-1968) | Erupean | WikiWon
အားဖြင့် 1953 အမျိုးသားရေးဝါဒ၏တပ်ဖွဲ့များက, အာရှတိုက်တွင်အကြီးအဥရောပအင်ပါယာ၏ပျောက်ဆုံးမှု speeded ခဲ့သော, ထိုဖွံ့ဖြိုးမှုကမ္ဘာ၏အခြားဒေသများမှဖြန့်ခဲ့ကြ. အဲဂုတ္တုပြည်၌အဆိုပါတော်လှန်ရေးအာရပ်လူအမျိုးမျိုးတစ်လျှောက်လုံးအမျိုးသားရေးဝါဒ၏တစ်ဦးထက်ပိုစစ်သွေးကြွနှင့်ပိုပြီးတော်လှန်ရေးပုံစံကို၏လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေတဲ့ဖို့နိဒါနျးခဲ့. အာဖရိကလွန်းခုနှစ်တွင်, မြောက်ပိုင်းနှင့်ဆာဟာရ၏တောင်ပိုင်းနှစ်ခုလုံး, အမျိုးသားရေးခေါင်းဆောင်များကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ရေးတည်ထောင်ရန်နှင့်ဥရောပလူနည်းစုများ၏အခွင့်ထူးကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဆုံးဖွတျခဲ့ကြသူအထွန်းသစ်စခဲ့သည်. ထိုအလွတ်လပ်ရေးယခင်ကိုလိုနီနှင့်ဥရောပအင်အားကြီးအကြားအငြင်းပွားမှုများအဘို့များစွာသောခိုင်ခိုင်လုံလုံနေဆဲရှိကြ၏အောင်မြင်ခဲ့ပင်ရှိရာ, အဆုံးစွန်သောအဘို့မကြာခဏဟောင်းကိုလိုနီဒေသများရှိတစ်ဦးအဓိကစီးပွားရေးလောင်းကြေးရှိသည်ဖို့ဆက်လက်.
အဆိုပါအနောက်ပိုင်းဥရောပပြည်ထောင်စုအကြားဆက်ဆံရေးနှင့်အာဖရိကနှင့်အာရှတိုက်ရဲ့အသစ်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်ရုရှားနှင့်ကွန်မြူနစ်အင်အားကြီးအတွက်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးမြှင့်အတွက်ဒီကအရမ်းအချိန်မှာစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ရှုပ်ထွေးခဲ့သည်, နှင့်ဤနိုင်ငံများနှင့်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးအဆက်အသွယ်, အထူးသဖြင့်အလယ်တန်းအရှေ့အတွက်. အသစ်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်ယေဘုယျအားဖြင့်အပေါ်သစ်ကိုကွန်မြူနစ်အဘို့မိမိတို့ကိုလိုနီသခင်ဖလှယ်ဖို့စိုးရိမ်မဟုတ်ကြပေမယ့်အစားအရှေ့နဲ့အနောက်အကြားတတိယကမ္ဘာကဖန်တီးငှါရှာကြံ. သို့သျောလညျး, သူတို့ကမ္ဘာကနိုင်ငံရေးပြိုင်ဖက်များအသေအချာသို့ဆွဲငင်ခဲ့ကြ, အနောက်ဘက်အင်အားကြီးနှင့်ရုရှားနှစ်ဦးစလုံးမဟာမိတ်ဖွဲ့သူတို့ရဲ့စနစ်တွေကိုတည်ဆောက်ခြင်းငှါရှာကြံအဖြစ်.
အဆိုပါဘဂ္ဂဒက် Pact: အနောက်ဘက်အင်အားကြီးသည်ကိုအာရှနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကွန်မြူနစ်ဝါဒပါဝင်တဲ့တယောက်နည်းလမ်းလိုလားသူ-Western အစိုးရနှင့်အတူစစ်ရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့၏ဖန်ဆင်းခြင်းခဲ့သည်. တွင် 1952 ဂရိနိုင်ငံနဲ့တူရကီနေတိုးနှင့်တူရကီဆိုဗီယက်နယ်စပ်အပေါ်အမေရိကန်အကြာတွင်စတင်တည်ထောင်ဒုံးပျံအခြေစိုက်စခန်းများသို့ရေးဆွဲခဲ့. အဲဒီဒေသမှာသူတို့ Palmerston နှင့် Disraeli ၏လက်ထက် မှစ. ဤမျှကာလပတ်လုံးဗြိတိန်နိုင်ငံများကကျင်းပခဲ့သောအကာအကွယ်ဆန့်ကျင်ကွန်မြူနစ်အခန်းကဏ္ဍချမှတ်လာခဲ့ကြသည်. တခြားနေရာအရှေ့အလယ်ပိုင်းဗြိတိန်မှာအများဆုံးပါဝင်ပတ်သက်အနောက်တိုင်းအာဏာကိုကျန်ရစ်. ဗြိတိန်နိုင်ငံကစစ်ရေးအကြံပေးအီရတ်နှင့်ဂျော်ဒန်ထဲမှာန, နှင့် 1955 အီရတ်တူရကီနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းရန်အားပေးအားမြှောက်ခဲ့သည်. ဒီမဟာမိတ်ပါကစ္စတန်ထည့်သွင်းရန်ကျယ်စေခဲ့, ပါရှားနှင့်ဗြိတိန်. ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်း anticommunist ကြီးနှင့်ပြင်းထန်စွာဧရိယာ၌ neutralist ပြည်နယ်များအားဖြင့်မကြိုက်. အိန္ဒိယဥပမာအားဖြင့်ကပါကစ္စတန်နှင့်အတူသူမ၏အငြင်းပွားမှုများအတွက်သူမ၏ဆန့်ကျင်လှည့်စေခြင်းငှါ၌လည်းကြောက်မက်ဘွယ်သောခဲ့သည်, ဗြိတိသျှကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူတို့အခြားဓနသဟာယနိုင်ငံ၏ဆန့်ကျင်မဟာမိတ်များအလိုမရှိကြောင်းလုပ်ပေမဲ့. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအားပေးအားမြှောက်ယင်းပဋိညာဉ်၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်, နှင့်ဘဂ္ဂဒက်စာချုပ်ဗြိတိန်နှင့်ပါကစ္စတန်ကတဆင့်ဗြိတိန်နဲ့တူရကီကတဆင့်နေတိုးတပ်ဖွဲ့နှင့်အရှေ့တောင်အာရှစာချုပ်အဖွဲ့အစည်းကနှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်. SEATO အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတက်လုပ်အခြားဆန့်ကျင်ကွန်မြူနစ်စစ်ရေးစာချုပ်ခဲ့သည်, ဗြိတိန်, ပြင်သစ်, သြစတြေးလျ, နယူးဇီလန်, ဖိလစ်ပိုင်, ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်ပါကစ္စတန်, နှင့်စက်တင်ဘာလများတွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်, 1954,လတ္တီတွဒ်အောက်ကတောင်ပိုင်းအနောက်ပစိဖိတ်ဧရိယာထဲမှာ t ကိုဏတန်ပြန်ကျူးကျော်.
သမိုင်း	aftermath of world war 2, aftermath of world war2summary, effects of world war2in points, effects of world war2on america, post world war2america, results of world war 2, what happened to germany after world war 2, what were the effects of world war 2	bookmark
ယခင်အပိုဒ် သစ်သီးများအဘို့အကြီးမြတ်ဆုံးသိကောင်းစရာများနှင့် Tricks | အစွမ်းထက်ကျန်းမာဘဝ
next ကိုပုဒ်မ အမြိုးသမီး | Feminization | Femoral Artery | Femoral Epiphysis, Slipped | အမြိုးသမီး